MPEG Streamclip Alternative for Windows: wax ku ool ah, Tool lagu kalsoon yahay
MPEG Streamclip ka dhigayaa suurto gal ah in aad si loogu badalo aad videos markii aadan ku faraxsanayn qaabka hadda. On top of diinta, waxa kale oo aad edit karaa oo kala soo bixi videos. Inkasta oo ay jiraan waxaa fara badan halkan ku bixiyeen, weli waa aan sida badan oo xul ah sida aad u yeelan karto. Haddii aad rabto in aad wax waa tallaabo, aad doonaysid in aad rabto in aad Wondershare Video Converter Ultimate, kale MPEG Streamclip ah u Windows. Waa wax ku ool ah, lagu kalsoonaan karo, oo lagu aamini karo, ku siinaya in ka badan in this mid ka mid Converter.
Wondershare Video Converter Ultimate ( version Mac la heli karo) waxaa si balaadhan ku kalsoon tahay sababta oo ah awoodda iyo awoodda, iyo waxa ay leedahay qaababka badan oo lagu sameeyo qalab dhameystiran diinta iyo qiraan aad videos. Waxaad noqon doontaa si loogu badalo files of cabir, download videos online, iyo edit aad videos si aad u eegto sida wax soo saarka dhamaystirtay in aad rabto in aad u naadiyo oo awoodi. Tani waxa ay si ay u nadiifiyaan aad videos iyo iyaga isticmaali karo hawl yar ka badan waxa ay abid ayaa ka hor.
Waa maxay tan MPEG Streamclip Alternative for Windows fiican
Sida loo rogo ama la Alternative si ay MPEG Streamclip for Windows
Waa maxay Tani MPEG Streamclip Alternative for Windows fiican
1. Beddelaan File kasta oo: Marka aad ku saabsan in la isticmaalo file a yihiin, uma baahnid inaad wax laga walwalo size. Size kasta oo loo isticmaali karaa Wondershare sababta oo ah waxa uu leeyahay xadeynta lahayn. Ma aha in aad si aad hoos ugu tayada ama naftaada xaddido. Tani waxay khuseysaa oo kale marka aad diinta files.
2. Speed ​​Gaarka ah: Speed ​​waa gaar ah si degdeg ah. Waxaad awoodi doontaa in aad video kaamil ah dhameystirin waqtigii ku jirin innaba.
3. interface Simple: Wondershare ka dhigaysa diinta fudud. Waxaad aan la leeyihiin in ay maraan habka dheer oo ay adag tahay in la helo videos aad rabto, maxaa yeelay, wax walba oo lagu sameeyey user maskaxda.
4. wejiyo Tool: Waxaa jira qaababka kale ee la heli karo, sidoo kale. Tan waxaa ka mid videos lagala soo goobaha badan, sixiddiisa files si ka badan ayay u soo jiidata iyo qofka waa, iyo in DVD gubanaya files si aad iyaga meel kasta wuxuu qaadan karaa. Tan kale MPEG Streamclip for Windows samayn kartaa arrin xoogaa ah oo dheeraad ah in converters kale xitaa ma xamili karaan.
Marka aad rabto in aad si loogu badalo video ah, waxaad leedahay oo keliya si aad u ogaato file, jiididda iyo hoos si ay u meel gaar ah, doortaan qaab, oo guji badalo. Tani waxa si fudud oo uu qof kasta u samayn kareen. Uma baahnid inaad wax aqoon hore converters, qaabab file, ama macluumaad kasta oo gaar ah si ay u isticmaasho. Marka ay dhammaato, waxaad awoodi doontaa in aad isticmaasho file cusub ee ay qaab cusub u sarifay.
Haddii aad raadinaya duwan MPEG Streamclip for Windows, Wondershare Video Converter Ultimate waa doorasho fiican. Iyada oo kale si ay u MPEG Streamclip for Windows, aad ka filan lahayd qaab isku mid ah iyo in ka badan. Taasi waa waxa aad la Wondershare Video Converter Ultimate, kaas oo kuu ogolaanaya in aad leedahay si buuxda gacanta aad videos. Haddii aad rabto in aad kala soo bixi video ama beddelid iyo saxaa, si si fudud ee aad samayn karto.
> Resource > Windows > MPEG Streamclip Alternative for Windows: wax ku ool ah, lagu kalsoonaan karo, Aamin